Tijaabinta Livefyre Sidenote ee Faallooyinka | Martech Zone
Tijaabinta Livefyre Sidenote ee Faallooyinka
Waxaan u dhex marnay nidaamka faallooyinka dhowr jeer Martech Zone. Nasiib wanaag, dhammaan aaladaha muhiimka ahi way iswaafajin doonaan faallooyinka (ma isticmaaleyno haddii aysan isticmaalin). Faallooyinka ayaa noqonaya mowduuc maalmahan maadaama faallooyinka faallooyinka ay faafayaan isla markaana inbadan oo ka mid ah wada hadalka midabada leh ay ka dhacayaan khadka tooska ah, taasoo u horseedaysa qaar ka mid ah baloogyo aad u waaweyn inay damiyaan gabi ahaanba faallooyinka
Waxaan la joogaa saaxiibkay Lorraine Ball midkaan oo sheegaya:
Aniga ahaan, baloog bilaa hadal ah wuxuu la mid yahay iskuul aan arday lahayn ama riwaayad bilaa dhagaystayaal ah. Aniga ahaan, kaqeybgal iyo la falgal akhristayaasha waa astaan ​​aasaasi u ah qorista wax qorista, iyo runtii faa iidadeeda ugu weyn ee blogger-ka.
Sidoo kale waligay taageere uma ahan inaan joojiyo istiraatiijiyadda sababtoo ah inta badan ma shaqeeyo. Ma jiraan tiro faallooyin ah oo leh qoraal kasta oo la dul dhigo Martech Zone, laakiin marka ay jiraan had iyo jeer waa muhiim aniga. Waxba igama gelin in aan daaweeyo kun faallooyin spammy ah si aan u qodo oo aan u helo hal xabbo - weli waa u qalantaa.
Taasi waxay tiri, maadaama wada hadalada badankood ay ka dhacayaan barta - waxaan doonayaa akhristayaashayada inay helaan oo ay ku biiraan wada hadaladaas. Disqus wuxuu leeyahay astaamo aad u wanaagsan oo midba midka kale uu raaco laakiin kuma haboona baahida loo qabo aqoonsashada cidda iyo goorta waxyaabaha la wadaagayo ee laga hadlayo. Taas waxaan ku sheegay wadahadal lala yeeshay Nicole Kelly waxayna tiri Live Guys way sameysay - markaa waxaan siin doonaa nidaamkooda tallaal kale.
Waxay sidoo kale ku daray Nadiifinta - hab loola qabsado xigasho ama qayb kadibna ka faalloodo gudaha ama bulsho ahaan. Marka - faallooyinka ma aha wax fudud oo aad sameynayso ka dib markaad aqriso boostada oo dhan, hadda waxaad si toos ah ugu soo galin kartaa wadahadalkaaga waxyaabaha ku jira!
Waa kuwan muuqaalka muuqaalka guud:
Hadaad ka heshay, ii sheeg! 🙂
Tags: faallooyinka blogcommentfaalloonayaDisqusnolosha
Fiidiyow: #Socialnomics 2014
VerbalizeIt: Tarjumaad, Qoraal, Codka iyo Video